Fantsom-boaloboka fanodinana aliminioma, lovia vita amin'ny aluminium Oval, horonam-bokatra - Jiahua
Allwin Pack Catering fonosana manam-pahaizana, amidy mihoatra ny firenena 50
Kaontenera ho an'ny sotera fiaramanidina
Trakitra fanaterana foil aluminium
Pana Roaster Aluminium
Ny sasany fitoeran-aluminium
Vata boribory boribory
Vata boribory mahitsizoro
Pop up ravin-taratasy
Kaontenera am-boaloboka toradroa
Kitapo latabatra alimina aluminium
Tart & Pie vilany
Tongasoa eto Allwin entana
Fiarovana sy fampialana voly
Allwin Pack dia miorina ao Beijing any Shina, izay orinasa famonosana sakafo feno, manokana amin'ny fitoeran-tsolika alimika, fitoeram-plastika, famolavolana sy fivoarana ny bobongolo, fanodinana mekanika R&D, varotra sy serivisy ho an'ny mpanjifa ho iray amin'ireo orinasa Integrated. Ny toby fanamboarana an'i Allwin Pack dia ao Hebei, Tianjin, Shandong ary Guangdong, manana atrikasa fanodinana vovoka tsy misy vovoka 30000 metatra toradroa isika, miaraka amin'ny fitaovana fanangonana fonosana automatique automatique ary rafitra fanarenana fako mandeha ho azy sy rafitra fanodinana. laboratoara fizahan-toetra sy fanandramana fampisehoana laboratoara, laboratoara famolavolana bobongolo, novolavolainay sy nosedraina efa ho arivo ny bobongolo fanodinana tsara ho mpitarika amin'ity orinasa ity.
Mampiasa teknolojia patanty mahery mihoatra ny 20 izahay eo amin'ny sehatry ny fanodinana foil aluminium hamenoana banga teknolojia maromaro
7 8 9 santimetatra manodidina ny Pan
Fonosana vita amin'ny aluminium
Mampiasa ny akora vita amin'ny aluminium foil izahay izay misy iraisampirenena amin'ny ankapobeny, sariaka amin'ny tontolo iainana ary avo lenta mba hanomezana mpanjifa amina kaontenera foil aluminium isan-karazany, manintona foil aluminium ho an'ny fandrahoana sakafo, foil aluminium foil ao an-trano ary andiana vokatra maro hafa
Tonga soa eto amin'ny Enquiry Allwin Pack
Mpanamboatra matihanina 15 taona hihaona amin'ny zavatra ilainao manokana amin'ny vokatra vita amin'ny alim-bolan'ny alimika, SAMPLE MAIMAIM-POANA ho an'ny fanombanana
Fa maninona no mihabetsaka ny olona maniry kaontenera foil aluminium noho ny fitoeran-javatra plastika?
Ny foil aluminium dia vita amin'ny firaka alimina alinalina aorian'ny dingana maromaro ahodinkodina, tsy misy metaly mavesatra sy zavatra manimba hafa. Amin'ny famokarana aluminium foil, ny fampiasana ny dingana famonoana hafanana hafanana avo lenta, mba hahafahan'ny foil aluminium azo antoka ao mifandray amin ...
1.Ny karazana famaritana rehetra dia azo namboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny habe sy ny halaliny dia afaka misafidy-afaka mifanaraka amin'ny takiana samihafa. 2. Kaontenera foil amin'ny foza ho an'ny sakafo nankatoavin'ny FDA sy KOSHER. Ny fiarovana sy ny fahasalamana, amin'ny alàlan'ny fanamorana ny hafanana. Araka ny tokony hifandraisana amin'ny ...
Eny, tsy misy olana. Hamarino tsara fa misokatra ny kaontenera, misoroka ny fiparitahan'ny hafanana ary ny fifanarahana mangatsiaka dia miteraka fipoahana, aza mampiasa zavatra tsy mahazatra toy ny fitaovana ao anaty lafaoro microwave, tsara kokoa ny mampiasa fonosana mahazaka hafanana. 1, aza avela hifandray amin'ny sarimihetsika plastika amin'ny sakafo: rehefa mampiasa sarimihetsika vaovao, amin'ny p ...
Allwin Pack dia miorina ao Beijing any Shina, izay orinasa famonosanan-tsakafo feno, manokana amin'ny kaontenera foil aluminium, kaontenera plastika